Kabtanka xulka qaranka England Harry Kane oo fariin u diray shacabka reer England – Gool FM
(England) 12 Luulyo 2018.Kabtanka xulka qaranka England Harry Kane ayaa fariin la wadaagay shacabka reer England, kadib markii ay isaga hareen koobka aduunka 2018 ee dalka Russsia.
Xulka qaranka Engladn ayaa wuxuu guuldaro 2-1 ah kala kulmay dhigooda Croatia kulankii wareega afar dhamaadka ee koobka aduunka 2018 ee dalka Russia.
Harry Kane ayaa bartiisa Twitter-ka kusoo daabacay fariin uu la wadaagay shacabka reer England.
“Waxaa maanta jira dareen fara badan, waxaan ku faanayaa kooxdan, iyo dhamaan shaqaalaha farsamada, waxay sameeyeen wax walba aan ku soo bandhigi karno awoodeyna mudo dheer, waxaan ka soo kabsanay caqabado badan oo ka dhacay England”.
“Waxaan dib u soo cusbooneysiinnay taageerayaasheena cajiibka ah, waxaan ku riyaaqnay tijaabadan, ma aheyn natiijada aan dooneynay, waxaana dareemeynaa xanuun, waan hubaa inaan wax badan ka baran doono kulanka Croatia “.
“Waxaa la gaaray xiliga aan sare u qaadi lahayn madaxyadeena, waa inaan ku faanaa midkeen kan kale, waxaan ku faraxsanahay in aan qeyb ka ahay kooxdan, waxaa ina hortaagan caqabada badan si aan u hormarino nafteena, waadna ku mahadsantihiin taageeridiina”.